जन्म महिना हेरेर केटीको स्वभाव पत्ता लगाउ । – AstroSimara.Com
सुन्दरता वा शिल स्वभाबका आधारमा होस् पुरुष भन्दा बढी महिलाको बारेमा मुल्यांकन गरिने चलन छ । बिशेष गरि महिलाको स्वभाव र सरलपनले सबैलाई आकर्षित गर्छ । महिलाहरु आफ्नै परिवेश अनुसारको सिको गर्ने गर्छन तर उनीहरुको स्वभाव जन्मेको महिना अनुसार पनि निर्धारण हुने ज्योतिषीय तथ्य पनि फेला परेको छ । कुन महिना जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? यस्ता छन् तथ्यहरु :
जेष्ठ महिनामा जन्म लिएका महिलाहरू उत्तम बुद्धि भएका हुन्छन् र उनीहरूको जीवनमा सुख र धन सहजै प्राप्त हुन्छ । यी महिलाहरूका लागि जीवनमा आइपर्ने कुनैपनि कार्यहरूमा समस्या हुँदैन् । यी महिलाहरू तिर्थधर्म गर्नेमा अगाडी हुन्छन् ।
साउन महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् । उनीहरूको जीवनमा समान रुपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ । यी महिलाहरूले सन्तानबाट सुख प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अधिकांस समय कुनै न कुनै बिमारीबाट घेरिरहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरू श्रीमान तथा प्रेमीबाट अधिक प्रेमको आशा राख्छन ।
फाल्गुन महिनामा जन्मलिने महिला धेरै दयावान हुन्छन् र कसैको पनि दुःख देख्न सक्तैनन् । उनीहरूको स्वभाव र विचार बढी धार्मिक हुन्छन् । यी महिलाहरू पढाइ लेखाइमा तेज हुन्छन् ।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ वैशाख १२ गते बुधबार